I-china Isantya esiphakamileyo semoto yemaski yomatshini wokusika umzimba yoMvelisi kunye noMthengisi | Naiwei
Isantya esiphezulu sokusika, ukuwelda kunye nokwenza umatshini wemaski, yamkela itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha umaleko we-3 ukuya ku-5 welaphu le-nonwoven, ulayishe ibhulorho yempumlo, kwaye usike umzimba wemaski yokuphuma.
Isantya esiphezulu sokusika, ukuwelda kunye nokwenza umatshini wemaski, isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubopha umaleko we-3 ukuya ku-5 welaphu le-nonwoven, ulayishe ibhulorho yempumlo, kwaye usike umzimba wemaski yokuphuma. Lo matshini ubandakanya indlela yokondla engalukwanga, indlela yokwenza into enje, indlela yokondla ibhulorho yempumlo, indlela yewelding ye-ultrasonic. Impumlo ibhulorho ufaka ngokuzenzekelayo, ubale ngokuzenzekelayo. Ingqondo yoyilo yalo matshini: ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, izinzile kwaye ithembekile, isantya esiphezulu, ngokusebenza kakuhle, ukuhambelana kunye nokusebenza kweendleko.
2. Izixhobo zempawu
A. Izinto ezibonakalayo zolawulo lokuqhekeka koxinzelelo lwezixhobo, uzinzo oluphezulu kunye nereyithi yokusilela esezantsi.
Imveliso eveliswayo inomsebenzi wokubala ozenzekelayo ukulungiselela ukubalwa kwamanani.
C. Inokuvelisa iiseli ezimbini ukuya kwezintlanu.
Inkqubo yolawulo lwekhompyuter, ukuvelisa okuphezulu kakhulu kunye nokuthembeka okuphezulu kakhulu. Iimveliso zenziwe ngokugqibeleleyo kwaye umgangatho udibana ngokupheleleyo okanye ungaphezulu kwemigangatho yovavanyo.
Izinto zokwenza imveliso zilawulwa kukulawulwa kwempixano yolawulo
Inkqubo yolawulo lwekhompyuter yenza imveliso izinzile kwaye ngokufanelekileyo
Zonke izinto ezenziweyo zikulungele ukuvavanywa okusemgangathweni okanye kugqithisiwe kwaye ukongiwa kwemathiriyeli eluhlaza kungaphezulu kwe-30%, ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza okuphezulu kuyafezekiswa.
H. iiseti ezimbini zendlela yokubopha umtya kwindlebe, ukwamkela uhlobo lohlobo lokutsala, kunye neseti yendlela yokutywina.
Yokubeka impahla ekrwada, impumlo ukulayisha ibhulorho,
Imaski yokusika umatshini,
Akuvunyelwe ukubamba i-transducer ye-ultrasonic enevolthi ephezulu. Ukushicilelwa
Ivili kunye nentloko yokufa ayinakuba ngaphezulu kwevolthi, eya kuthi yonakalise intloko yokufa.
Ii-4servo motors, 2 ultrasonics, 4cylinders
Egqithileyo Semiauto servo motor earloop welding umatshini
Okulandelayo: Tsala enye i-servo motor yangaphandle ye-earloop ngokuzenzekelayo kumatshini wokwenza imaski
Isantya esiphezulu se-servo motor mask yokusika umatshini
Umatshini weServo Motor Mask